Asan-jiolahy sy asan-dahalo : basy Kalachnikov 48 saron’ny zandary | NewsMada
Asan-jiolahy sy asan-dahalo : basy Kalachnikov 48 saron’ny zandary
Nandritra iny taona nivalona iny, basy miisa 117 no saron’ny zandarimariam-pirenena, nampiasaina tamin’ireo karazana asan-jiolahy sy asan-dahalo. Basy mahery vaika Kalachnikov ny 48 tamin’ireo.
Maro ny basy sarona, ary efa anjatony izany, hoy ny zandary. Mahatratra 117 ny basy tratra, ka 48 amin’ireo basy mahery vaika toy ny Kalachnikov. Basim-borona miisa 69 ny sarona, ary bala samihafa 625. “Araka ny voafaritra ao amin’ny tanjona nokendrena tamin’iny taona iny dia tokony hiakatra 25% ny tamin’ny taona teo aloha ny fahitana sy fahazoana basy tamin’iny taona 2017 iny, ka 81,81% an’io tanjona io no tratra”, hoy ny fanamafisana.
Tsy latsa-danja amin’ireo ny asan-jiolahy eny amin’ny lalam-pirenena. Miisa 21 ny fanakanan-dalana niseho. “Hita fa nihena latsaky ny antsasany izany raha oharina tamin’ny taona 2016 izay niisa 46. Marihina fa nanaovana ezaka manokana ny fanaraha-maso ny lalam-pirenena faha-2 sy faha-7 tao anatin’ny telovolana farany ary nohamafisina hatrany ny fiaraha-miasa amin’ireo koperativa nasionaly amin’ny fanarahan’ny zandary ny fiara mpitatitra mandalo amin’ireo lalana ireo”, hoy ny fanazavana.
Valo any am-ponja noho ny kidnapping
Nahatratra valo ny isan’ny olona voasambotry ny zandary amin’ny raharaha fakana an-keriny ny taona 2017 teo, teto an-dRenivohitra. Nambaran’izy ireo fa nisy trangana fakana an-keriny miisa 11 tamin’iny taona iny, ka olona 12 nalain’ny jiolahy an-keriny. Valo tamin’ireo teratany vahiny raha Malagasy kosa ny efatra. Enina tamin’ireo olona valo no naiditra am-ponja vonjimaika raha nahazo fahafahana vonjimaika ny iray. Tranga iray kosa mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka. Mbola misy Karana iray tsy hita popoka hatramin’izao, ary tsy nahazoam-baovao mihitsy na tamin’ny zandary na tamin’ny polisy.
“Raha ny tanjona napetraka tamin’ny taona 2017 iny, tokony hiampy 75%-n‘ny efa vita tamin’ny taona 2016 ny tahan’ny famahana ny olan’ny fakana an-keriny. Tratra hatramin’ny 70,13% io tanjona io ary mihoatra noho ny teo aloha izany”, hoy ny fanazavana.
Momba ny asan-jiolahy indray, 709 ny tranga niseho ny taona 2017; 809 ny jiolahy voasambotra, raha 161 ny isan’ny jiolahy maty voatifitra. “Raha oharina ny tamin’ny taona 2016, somary niakatra kokoa io tranga mikasika ny asan-jiolahy io satria nahatratra 544 izy io tamin’izany. Nefa raha ny tanjona napetraka tamin’iny taona 2017 iny no jerena, tratra eo amin’ny 73,77% izany”, hoy ny zandary.
Na eo aza ireo tomban’ezaka sy asa vitan’ny zandary ireo, mbola mitaky mafimafy kokoa ny vahoaka, izay mikaikaika hatrany amin’ny firongatry ny asan-jiolahy na an-dRenivohitra na ambanivohitra.